My Presentations: ၁၄-၁၂-ဝ၆ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၏ နီပေါနိုင်ငံ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်
၁၄-၁၂-ဝ၆ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၏ နီပေါနိုင်ငံ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်
၂၈-၁ဝ-ဝ၆ နေ့၌ South Asian Conference (Satyagraha Conclave) ကို နယူးဒေလီ Gandhi Peace Foundation တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို အန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ဘူတန်၊ ပါကစ္စတန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့မှကိုယ်စားလှယ်များဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရာ တရပ်အဖြစ် နီပေါနိုင်ငံတွင် မြန်မာ့အရေးကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရန် လက်မှတ်ထိုး(ကင့်ပိန်း) ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အတွက် ဒေါက်တာတင့်ဆွေကပူးတွဲပါ Memorandum ကိုရေးသားလျက် နီပေါနိုင်ငံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဟောင်းများအဖွဲ့ (Ex-MPs’ Club) ထံပေးပို့ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းလက်မှတ် ၁ဝဝဝ ကျော်ရရှိသောအခါ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတခုပြုလုပ်လျက် ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးထံပေးပို့ရေးအတွက် ၁၅-၁၂-ဝ၆ နေ့ကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နီပေါ လွှတ်တော်သို့လည်း သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများမှ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံလျက် လက်တွေ့ ကျသော ထောက်ခံမှု ရရှိရေး ဆွေးနွေးရန်စီစဉ်ထားခဲ့သည်။
• ၁၄-၁၂-ဝ၆ နေ့တွင် ဒေါက်တာတင့်ဆွေနှင့်ှAFPI general secretary Sudhindra Bahdorea တို့နှစ်ဦး နီပေါနိုင်ငံ ခတ္တမတ္တူသို့ ထွက်ခွါ ရောက်ရှိရာ (Ex-MPs’ Club) မှ တာဝန်ရှိသူများကကြိုဆိုကြသည်။
• ၁၅-၁၂-ဝ၆။ နံနက် ၁ဝနာရီ၃ဝ တွင် ခတ္တမတ္တူမြို့ ၌ နီပေါနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ (Nepali Congress NC, Nepali Congress Democratic NCD, United Marxist Leninist UML) တို့က မိန့်ခွန်းများပြောကြားပြီးနောက် အင်အား (၃ဝဝ)တို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပုံတူပန်းချီကားနှင့် ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်လျက် ကြွေးကျော်သံများ ဟစ်အောင်ကြကာ (UNDP) ရုံးသို့ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။
• ၁၁နာရီ ၃ဝ တွင် (UNDP)ရုံး ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mathew Kanane ထံ နီပေါအတ် (၅ဝ)အပါအဝင် စုစုပေါင်းလက်မှတ် ၁ဝဝဝ ကျော်ထိုးထားသည့် Memorandum ကို (Ex-MPs’ Club) မှတာဝန်ရှိသူများ၊ SAFPI general secretary နှင့် NCGUB PMO တို့က ပေးအပ်လိုက်သည်။ Mathew Kanane ကလည်း UN Assistant General Secretary Mr. Gambari ၏ခရီးစဉ် အကြောင်းပြောကြားလျက် အဆောတလျင် ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုသည်ကို ကတိပေးပြောကြားသည်။
• ၁၂ နာရီ။ (Ex-MPs’ Club)မှတာဝန်ရှိသူများ / SAFPI general secretary နှင့် NCGUB PMO တို့သည် နီပေါလွှတ် တော်သို့ သွားရောက်ကြသည်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမစတင်မီ လွှတ်တော်တွင်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း ဆွေးနွေးကြသည်။ ထို့နောက်လွှတ်တော် ကျင်းပစတင်သည်အား တက်ရောက် လေ့လာကြသည်။
• လွှတ်တော်စတင်လျင်စခြင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌှSubhas Newang က မြန်မာလွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာတင့်ဆွေအား ကြိုဆိုကြောင်းပြောကြားပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုလျက် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအားထောက်ခံကြောင်း ကြေညာရာ တက်ရောက်နေကြသာ လွှတ်တော်အမတ်များအားလုံးက ထောက်ခံချက် တခဲနက်ပေးကြသည်။
• ထို့နောက် လွှတ်တော်တွင်းမှာပင် နေ့လည်စာစားပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဌှSubhas Newang အား ၄င်း၏ရုံးခန်းသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံကာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလျက် အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။ ပါလီမန်တွင်းမြန်မာ့ အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် အားရိုက်ထားသည့် VCD မိတ္တူရှိရေးမေတ္တာရပ်ခံသည်ကို သဘောတူခဲ့သည်။
• ၄ နာရီ Reporters’ Club, Nepal ၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သည်။ Mahendra Yadav “Madhukar” MP, Chairman Foreign Relations & Human Rights Committee, Chin Kaji Shrestha, former minister, Nepali Congress, HomRaj Dahal, member secretary Ex-MP Club, Arjun Thapa, ex-MP Nepali Congress Democratic, SAFPI general secretary နှင့် NCGUB PMO တို့က ရှင်းလင်း ပြောကြားကြသည်။ နီပေါ တီဗွီများ၊ သတင်းစာများ၊ ရေဒီယိုများကသတင်းဖေါ်ပြကြသည်။
• Nepali Congress Democratic party Vice chairman Mr. Praksh Mansingh က ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းသည်။
• ၁၆-၁၂-ဝ၆ နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် (Ex-MPs’ Club)မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ ဆွေးနွေးသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများမှာ -
• နီပေါလွှတ်တော်တွင်းမြန်မာ့အရေးအဖွဲ့ (Burma Caucus)တခု ဖွဲ့စည်းရေး၊
• NCGUB ဝန်ကြီးချုပ်အားဗီဇာရရှိရေးနှင့် မြန်မာ့ကွန်ဖရင့်တခု နီပေါတွင်ကျင်းပရေး၊
• နီပေါလွှတ်တော်မြန်မာ့အရေးအဖွဲ့အား AIPMC နှင့်၎င်း အိန္ဒိယမှ အမတ်များနှင့်၎င်း ဆက်စပ်ရေး၊
• အိန္ဒိယမှအမတ်ရရှိရေးတွက် SAFPI general secretary မှ တာဝန်ယူမည်။
နီပေါနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာ့အရေးလုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားမှု
RFA။ ။ ဒီကနေ့သောကြာနေ့ နံနက် (၁ဝး၃ဝ) အချိန် နီပေါနိုင်ငံ ခက်တမန်ဒူးမြို့၊ မိုင်တိက အရပ်ကနေ နီပေါအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရုံးအထိ လက်ရှိပါလီမန်အမတ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပါလီမန်အမတ်ဟောင်းတွေနဲ့အတူ NGO အဖွဲ့တွေ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေ စုစုပေါင်း အင်အား (၃ဝဝ) ဝန်းကျင်လောက်ဟာ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကိုေºကွးကြော်သံတွေနဲ့အတူ ချီတက်ပွဲတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နီပေါနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေရုံးကတဆင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးဆီကို သဝဏ်လွှာတစောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသဝဏ်လွှာမှာ နီပေါနိုင်ငံ လက်ရှိအမတ်ပေါင်း (၅ဝ) နဲ့ နီပေါပြည်သူတွေရဲ့လက်မှတ်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ တောင်းဆိုထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အမြန်ဆုံးအာဏာလွှဲပြောင်းပေးရေး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေ ထိရောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ် ချမှတ်ပေးရေးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီသဝဏ်လွှာကို UNO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် (မစ္စတာ မက်သယူး၊ ကာနေး) ကလက်ခံယူပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ထံကို ပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ နီပေါပါလီမန်အမတ်ဟောင်းများအဖွဲ့ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ အဲဒီနောက် ပါလီမန်အမတ်ဟောင်းများနဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ အပြင် တောင်အာရှ လူထု လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် (မစ္စတာ စူဗင်ဒရာ ဗဒိုဗီးယား) ပါ နီပေါပါလီမန်ကို သွားရောက်ခဲ့ကပါတယ်။ နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ ပါလီမန် ဥက္ကဌနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလည်း တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နီပေါ ပါလီမန်ဥက္ကဌရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ နီပေါ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါလီမန်ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကနေ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြေညာချက်တရပ်ကိုလည်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘာတွေ ထုတ်ပြန်ကြောညာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ နီပေါပါလီမန် အမတ်ဟောင်းများ အဖွဲ့ရဲ့ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှုး (မစ္စတာ ဟုန်းမရာခ်ျ ဒါဟာ) ကနေ အခုလို့ပြောပြပါတယ်။
မစ္စတာဟုန်းမရာခ်ျ ။ ။ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှတ်ပေးဘို့၊ အရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ပါလီမန် အမတ်တွေနဲ့အတူ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အမြန်ဆုံး ထူထောင် သွားဘို့၊ နီပေါပါလီမန်ကနေ ကြေညာသွားတာကို မစ္စတာဟုန်းမရာခ်ျ ကနေ ပြန်လည်တဆင့်ပြောပြသွားတာပါ။
RFA။ ။ သူတို့အနေနဲ့အခုလို မြန်မာ့အရေးကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်ရတာကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် (၆ဝ) ကာလက မြန်မာ အစိုးရဟာ နီပေါနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကို အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်း အဲဒီတုန်းက ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို မြန်မာပြည်မှာ ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီကနေ့မှာတော့ နီပေါနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ စနစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်၊ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်းနေတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေတာမို့ စာနာရိုင်းပင်းမှုနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထောက်ခံအားပေးရတာ ဖြစ်ပါ တယ်လို့၊ နီပေါလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းများအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးကန္မေင်္ဗ ကိုပြောပြပါတယ်။ အခုလိုနီပေါနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့အရေး ကိုထောက်ခံအားပေးလာအောင် အဝေးရောက်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကနေ အိန္ဒိယနိုင်ငံက လူထုလုပ်ရှားမှု့ အဖွဲ့အစည်း တချို့နဲ့အတူ သွားရောက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကိုလည်း နီပေါနိုင်ငံမှာ ဘာများ ဖြည့်စွက်လုပ်ဆောင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသလည်းလို့မေးကြည့်ပါတယ်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ။ ။ နောင်လည်းဘဲ နီပေါနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့ လုပ်စရာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် နီပေါ ပါလီမန်ထဲမှာ ဗမာပြည်အရေး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ ဖွဲ့ရေးကိုလည်းဆွေးနွေးနေပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ခု ၃ ခုနဲ့ဆွေးနွေး ပြီးပါပြီ၊ သူတို့ကလည်းသဘောတူပါတယ်။ မကြာခင်တောင် ဖြစ်စရာအကြောင်း ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်က ဒါတင် မကဘဲ AIPMC လို့ခေါ်တဲ့ အာစီယံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လည်းလုပ်ချင်တဲ့အတွက် စောင့်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လမ်းကြောင်းကောင်းပေါ်တော့ရောက်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
RFA။ ။ ဟုတ်ကဲ့ နီပေါပါလီမန်ထဲမှာ ဘယ်လောက်များအရေးပါမလဲ၊ ဘယ်လောက်များထိရောက်မှုရှိမလဲ မသိဘူးခင်ဗျ။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ။ ။ နီပေါကိုကြည့်ရင် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ အရေးမပါသလိုထင်နိုင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က အကောင်း မျှော်လင့်ချက်နဲ့အတူ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ သန္နိဌာန်အပေါ်ကနေ ကျနော်တို့လုပ်တာပါ။ အလားတူပဲ တခြားနေရာက တခြားပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း သူတို့လုပ်သင့် လုပ်အပ်တဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေလုပ်၊ ပြည်တွင်းကခေါင်းဆောင်များ ပြည်တွင်းကလူထုကလည်း ကိုယ်လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခြင်းအား ဖြင့် ကျနော်တို့အားလုံးလိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတခုရဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး စုပေါင်းလုပ်ကြတော့မှဘဲ ကျနော်တို့က အားလုံးအတွက် အောင်မြင်ကြမှာပါ။
Kathmandu, December 16:
The House of Representatives on Friday demanded immediate release of the pro-democracy leader of Myanmar, Ang San Suu Kyi. WelcomingaMyanmarese leader, Tint Swe, in the House on Friday, Speaker Subas Nembang had put forthaproposal at the meeting of the House, demanding the release of Suu Kyi from house arrest.
Swe attended the meeting of the House. Suu Kyi symbolises Asian democracy, Nembang said.
Meanwhile, members of the Ex-MPs' Club and the South Asian Forum for Peoples' Initiatives (SAFPI) took outarally from Maitighar on Friday.
They submittedamemorandum to the United Nations Security Council through the UN House in Kathmandu, requesting the world body to passaresolution on the human rights situation in Myanmar.
Accepting the memorandum, Mathew Kahane, the UN resident representative in Nepal, said he would pass it to the UN Security Council. "The issue of Myanmar isalong-standing one. I hope the council takes up the issue seriously," Kahane said.
Tint Swe andarepresentative of the SAFPI, Sudhindra Bhadoria, are here to participate in programmes being organised by the civil society and former MPs with an aim to press for the restoration of democracy in Myanmar and for the release of Suu Kyi.
Speaking at the Reporters' Club, Swe appreciated the parliament's proposal seeking the release of Suu Kyi.
Swe said the Nepali parliament has become the first parliament in the world to tableaproposal seeking the release of Suu Kyi.
Addressingamass assembled at the Maitighar Mandala, Swe said: "The Security Council should passabinding resolution on the situation in Myanmar. We have already hadanumber of resolutions in the past to address our problem, but in vain."
According to him, there are as many as 1,144 political prisoners, including 14 members of parliament, in Myanmar. Khun Tunoo,aleader of Shan , the second largest party of Myanmar, was sentenced toa106-year jail term. "Seven years were added to his term later as he happened to listened to radio. You can imagine the situation."
Mahendra Yadav 'Madhukar', the head of the Foreign Ministry and Human Rights Committee, said the Nepali parliament is ready to make the "move required" for the release of Aung San Suu Kyi and the restoration of democracy in Myanmar. "We are ready to fight yet another battle for democracy be it at home or abroad," he said.
Bhadoriya of the SAFPI said: "Nepal has already set an example in the fight for democracy. Time has come for it to fight against 'undemocratic move' in the neighbourhood."
Among others, NC vice-president Sushil Koirala, leader Dr Ram Baran Yadav, NC (D) leader Hom Raj Dahal, Bharat Shah, NC (D) leader Deep Kumar Upadhyay and CPN (UML) leader Bijaya Subba expressed solidarity with the Myanmarese struggle for democracy.
Rally held for human rights in Myanmar [2006-12-16]
KATHMANDU, Dec. 15: A peace rally has been organised from Maitighar Mandala, Kathmandu to the UN Office, Pulchok, Lalitpur to exert pressure to peacefully settle the political unrest in Burma, to release all the political detainees and to restore human rights in the country.
After the peace rally organised by the ex-MP's club,amemorandum was to be presented to the representative of UN based in Nepal demanding the Security Council to take initiatives for the solution of the political crisis in Burma.
Prior to this, speaking at the gathering at Maitighar Mandala, Vice President of Nepali Congress Sushil Koirala said Nepal is in favour of the protest for the release of the statesmen including leader Aung San Suu Kyi and, for the establishment of democracy and human rights in the neighbouring country Burma (Myamnar).
Similarly,aMinister in the overthrown elected Prime Minister's cabinet, Dr Tint Sue thanked for the support shown by Nepal Government, political parties and organisations for the political change in Burma. He also laid stress on the need to exert pressure on the UN by the neighbouring countries to enforce the mandatory proposal passed by the Security Council regarding this.
Chairman of the South Asian Forum for Peoples Initiatives (SAFPI), Sudhindra Bhadoriya stated that the solidarity shown by Nepal for the political crisis of Burma would be echoed in the world, and pointed out the need to consolidate the mutual cooperation to shun the activities against democracy in South Asian nations.
Likewise, at the gathering, Chief Whip of NC (D), Tek Bahadur Chokhyal, NC parliamentarians duo Benupraj Prasain and Ram Chandra Tiwari, President of the Foreign Affairs and Human Rights Committee, Mahendra Madhukar, CPN-UML MPs Bijaya Subba, Vice-President of PAPAD, Shalikram Singh and Member-Secretary of the organising body, Homraj Dahal also extended their support and focused that all democratic nations should be united for the establishment of democracy and human rights in Burma.
Posted December 17th, 2006 by Raj Shekhar
15th of December 2006 wasagolden day in the history of Asia. Nepal -asmall land locked country under the shadow of Himalayas had shown democratic nations of Asia, Africa and Latin America, an unfailing courage in setting the examples for world community to re-think their engagement with military regime in Burma popularly known as SPDC (State Peace and Development Council). On this very august day, the House of Representatives in Nepal put forwardaproposal for the immediate release of Daw Aung San Suu Kyi and restoration of democracy in Burma, while welcoming Burma’s exile democratic leader Tint Swe in the House.
The speaker of the Nepal’s House of Representatives’, Mr. Subas Nembang remembered Suu Kyi - asasymbol of Asian democracy. Through this act of solidarity with Burmese people, Nepal has become first parliament in the world to tableaproposal seeking the release of Suu Kyi, who had already spent more than 4000 days in the house arrest. Later on members of the Ex-MPs’ Club and the South Asian Forum for People’s Initiatives (SAFPI) took outarally from Maitighar and submittedamemorandum to the United Nations Security Council through the UN House in Kathmandu, requesting the world’s powerful body to strongly think about human rights violation in Burma and take immediate action.
Probably, Indian Prime Minister and Congress leader, Dr. Man Mohan Singh has forgotten even the words of one of his great leaders of India, Jawaharlal Nehru, that, “We in India have been conditioned throughout our history inapeculiar way. Our greatest leader of modern times was neitheraman of wealth nor of military power, nor of position; yet the millions of India bowed their heads before him and tried to follow his great lead. This is the type of man we shall always honour, even in the modern world.” (Jawaharlal Nehru, in his welcome speech to US President – Eisenhower, onastate visit to New Delhi in December 1959). It is for the Indian Prime Minister, Man Mohan Singh has to analyze that, by engaging with military junta in Burma on the pretext of Look East policy, whom he is honouring - Nehru or Gandhi ji (whom J.L. Nehru was referring) or brutal military power in Burma? Or, Does noble laureate Suu Kyi truly following the path of Nehru by accepting Gandhi as her political guide and guru?
Ex-MPs’ Club, Nepal
Consultative status received from the Parliament
• The President of the UN Security Council
• The Hon. foreign ministers of the members of the UN Security Council: Argentina, China, Denmark, France, Ghana, Greece, Japan, Peru, Qatar, Russian Federation, the Republic of Congo, Slovakia, the United Kingdom, United Republic of Tanzania, the United States
• His Excellency Mr. Kofi Annan, Secretary General of the United Nations
Subject: An appeal to the UN Security Council to take appropriate action (a binding resolution) on Myanmar/Burma.
We, the concerned friends of Myanmar/Burma from Nepal appeal to all members of the UN Security Council to urgently address the rapidly deteriorating situation in Burma, which has reached beyond the international borders.
Myanmar/Burma is on the verge of devastation unless national reconciliation is reached through negotiation and compromise. Indicators that have raised our concern are:
• Increased intimidation, harassment, politically motivated arrests, and restrictions imposed on members of the National League for Democracy (NLD).
• Recent arrest of the student leaders who have already served long prison terms and are honestly working for national reconciliation.
• Rapidly deteriorating economic situation.
• HIV epidemic becoming out of control and Myanmar/Burma being source of HIV spread to neighboring countries.
For the above reasons the domestic situation turned into regional as well as international issue. Therefore the situation reached the UN Security Council and it correctly decided on September 15, 2006 to include the situation in Myanmar/Burma in the official agenda. We welcome that historic decision.
We totally agree with the appeal by the NLD for UN Security Council's binding resolution for national reconciliation and democratic transformation in Burma through dialogue.
It is obvious that SPDC has no political will for the reconciliation. The National Convention, the first step of the 7-phase Roadmap proposed by the SPDC has been rejected by all major political parties, which have won the election held in 1990. Accordingly we request the members of the UNSC to passabinding resolution calling for national reconciliation and democratic transformation in Burma throughapolitical dialogue. We would like to sincerely suggest that the resolution should call upon the SPDC to:
• Implement the process of national reconciliation by fixingareasonable time frame.
• Immediately and unconditionally release U Tin Oo (Vice Chairman of NLD), Daw Aung San Suu Kyi (General Secretary of NLD), U Khun Tun Oo (Chairman of Shan Nationalities League for Democracy), the student leaders and other political prisoners and allow them to participate in the democratic transformation process.
• To enter intoameaningful political dialogue with NLD and other political forces including the leaders of the ethnic nationalities towards national reconciliation and democratic transformation.
Posted by Dr. Tint Swe at 2:58 AM